China Iyo yekushandisa musimboti wealuminium poda peta mune aerated kongiri Kugadzira uye Fekitori | Teng'an
Iwo anoshanda musimboti weaerated kongiri aluminium poda
Sezvo isu tese tichiziva, aluminium isimbi inoshanda kwazvo. Inogona kugadzirisa nemvura kutsiva iyo hydrogen iri mumvura uye kugadzira alumina yakasimba. Nekuti iyo pamusoro pealuminium poda inodzika mumhepo yakave yakasanganiswa neoksijeni iri mumhepo, inogadzira inert alumina yekudzivirira. Membrane inodzivirira kusangana pakati pealuminium nemvura. Pane imwe huwandu hwealkaline zvinhu mune iyo aerated kongiri slurry, senge calcium hydroxide, uye alumina inogona kunyungudutswa mune alkaline mhinduro yekugadzira metaaluminate. Kana iyo oxide firimu iri pamusoro pealuminium poda yanyungudika, simbi aluminium inopindirana nemvura kutsiva iyo hydrogen iri mumvura uye inogadzira gelatinous aluminium hydroxide. Nekudaro, iyo zvakare inodzivirira kusangana pakati pemvura uye pamusoro pesimbi yesimbi aluminium, senge aluminium oxide. , Saka kuti maitiro asagone kuenderera. Nekudaro, aluminium hydroxide inogona zvakare kuputswa mune alkaline mhinduro dzekugadzira metaaluminate. Nenzira iyi, mune alkaline mhinduro, aruminiyamu inogona kuenderera ichiita nemvura kugadzira hydrogen gasi kusvikira simbi aluminium yapera. Iyo hydrogen inogovaniswa zvakafanana mupurpiti pamwe neanotenderera mabhuru, ayo anowedzera vhoriyamu yeslurry uye anogadzira porous silicate chigadzirwa mushure mekuomesa.
Yedu aluminium pastes inoshandiswa muindasitiri yekuvaka yekugadzira autoclaved aerated kongiri (AAC). Semvura yakavakirwa uye yekunamatira mhando, zviri nyore kuwedzerwa mukati meAAC block yekugadzira muchina, ine mashoma kusvibiswa pane zvakatipoteredza.
Mapepa ane 65%, 70% yezvakasimba zvemukati zvakajairwa. Zvimwe zvirimo zvikukutu uye zvakasiyana Particle saizi zviripo kuti uwane iyo chaiyo hydrogen gasi kuongorora, pore chimiro, density compressive simba, reaction time (kugara nguva) inokwana mune chero gadzira system.
Pashure: Aluminium poda yekugadzira yekugadzira maitiro
aruminiyamu flakes muAAC
aruminiyamu peta mutengo